★မြန်မာ့အလင်း★: ကျုပ်တို့က မှားတယ်ဆိုပဲ (ပြန်လည်တင်ဆက်သည်)
နအဖလူတွေ ဘာလုပ်လဲကြည့်ပါ။ ဦးနုနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကုလားအလိမ်ခံရလို့ဆိုပြီး အပြစ်တင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောင်မှာ ဘယ်လို အလိမ်မခံရအောင် လုပ်ရမလဲဆိုတာအကြံမပေးပါဘူး။ ထို့အတူပဲ လိမ်တဲ့ကုလားကိုလဲ အပြစ်မတင်ပဲ ချန်ထားခဲ့ပါတယ်။ လိမ်တဲ့ကုလားကိုတော့ ဘာမှမပြောပဲ လိမ်ခံရတဲ့သူကိုပဲ အပြစ်တင်တယ်ဆိုတာ မရိုးသားပါဘူး။ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စပေါ်ကနေ နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်တာ သိသာပါတယ်။
ဒီမိုမြန်မာတွေ ဘာလုပ်လဲကြည့်ရအောင်ပါ။ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ဒုက္ခသည်အတုဆိုတာ လူတိုင်းသိနေတာပဲ။ မွတ်ဆလင်တွေဟာ အောက်တန်းကျတဲ့ နည်းတွေနဲ့ ဘာသာရေးနယ်ချဲ့တဲ့ သမိုင်းကို မသိဟန်ဆောင်ထားပြီး ရိုဟင်ဂျာကိစ္စဟာ ဘာသာရေးမဟုတ်ဘူးလို့ လက်ခံထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုဆိုရင် သူတို့ ဆီပုံးတွေမှာ ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ မွတ်ဆလင်အရေး မဆွေးနွေးဖို့ တားမြစ်ထားပါပြီ။ နအဖဘာလုပ်လုပ် အမြဲတမ်း စတိတ်မန့်ကြီးတွေထုတ်ပြီး ကန့်ကွက်နေတဲ့ ဒီမိုတွေဟာ အခု ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်အတုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာစတိတ်မန့်မှ မထုတ်ပါဘူး။ ဒီမိုမြန်မာတွေဟာ နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်အတွက် အခုလို ပါးစပ်တွေပိတ်နေတာ အရမ်းစိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ဒီမိုမွတ်ဆလင်တွေဘာလုပ်လဲ ကြည့်ကျရအောင်ပါ။ ဒီမိုမွတ်ဆလင်တွေက အင်မတန်ကို လိမ္မာပါးနပ်ပါတယ်။ မြန်မာတွေက တံဆိပ်အမျိုးမျိုးတပ်ပြီး ရန်ဖြစ်၊ စောက်တင်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာ အခွင့်အရေး ယူပြီး ဘာသာရေးနယ်ချဲ့ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ သူတောင်းစားဗျူဟာအရ ရိုဟင်ဂျာအရေးဟာ ဘာသာရေး မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီး ငိုသံပါပါနဲ့ ပြောနေပါပြီ။ ကုလားဆိုတာကတော့ မတရားလုပ်ရလို့လည်း ရှက်တတ်တဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူး။ (စောက်ရှက်ရှိတဲ့ မွတ်ဆလင် ယောကျားနဲ့ မိန်းမကိုတွေ့ဖူးရင် ပြောစမ်းပါ) ကုလားတွေ အကောက်ကြံနေတာ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စ တစ်ခုတည်း ထင်နေသလား? ကုလားတွေက သူတို့ မွတ်ဆလင်ဘာသာအတွက်ဆိုရင် လူစိတ်ရှိတာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့တွေမှာ အောက်တန်းကျတဲ့ နည်းလမ်း အများကြီးရှိသေးတယ်။ သူတို့က တခြားလူတွေနဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေးတော့ လိုချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့ သစ္စာမထာနိုင်ဘူးတဲ့။ အဲလောက်ယုတ်ညံ့တဲ့ လူရမ်းကားတွေပါ။ ကိုယ့်သမီးအရင်းတောင် အဖေနဲ့ အမေပေါင်းပြီး မုဒိမ်းကျင့်တဲ့သူတွေဆိုတော့ သူတို့အကြောင်း မေ့ထားလိုက်ပါ။
ကျနော်တို့ကို ကုလားကိစ္စ အကြောင်းပြုပြီး နအဖနဲ့ ဒီမို စည်းလုံးအောင်လုပ်နေတယ်လို့ ပြောနေပါတယ်။ ဒီမိုမြန်မာတွေနဲ့ နအဖ လူတွေက မကောင်းတဲ့ အမြင်နဲ့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်က နအဖ၊ ဒီမို၊ KNU, DKBA , ရခိုင် , ဗမာ , ကချင် , ရှမ်းဆိုတဲ့ တံဆိပ်တွေကို မေ့ထားပြီး စည်းလုံးအောင် ကြိုးစားနေပါတယ်ဆိုတာ မှန်ကန် ပါတယ်။ တိုင်းပြည်အပေါ် အန္တာရယ်ကျရောက်လာရင် ၀ါဒမတူတဲ့သူတွေဟာ စည်းလုံးပြီး တိုက်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာ လူမျိုးတိုင်း နိုင်ငံတိုင်းက လက်ခံပါတယ်။ ကျနော်တို့လုပ်သလို တခြားလူမျိုးတွေလည်း လုပ်နေတာပဲ မဟုတ်ပါလား? အဲဒါက ထူးဆန်းလို့လား? အမျိုးသားရေးဆိုတာ ကြားဖူးလား? နိုင်ငံချစ်စိတ်ဆိုတာ ကြားဖူးလား? အမျိုးဘာသာ သာသနာ ဆိုတာ ကြားဖူးလား?
ကဲ.. ကျုပ်တို့မြန်မာတွေ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အဖိုးကြီးတွေဟာ လွတ်လပ်ရေးရတဲ့ အချိန်က စပြီး ၆၁ နှစ်ကြာတဲ့အထိ တံဆိပ်အမျိုးမျိုးနဲ့ တစ်ဖက်ကို တဖက် စောက်တင်းပြော ရန်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ကုလားကိစ္စမှာလဲ နအဖနဲ့ ဒီမိုတွေဟာ နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ အဲဒီလုပ်ရပ်တွေက မှန်ကန်တယ်ထင်ပါသလား? အခုတော့ ၀ါဒမတူ၊ တံဆိပ်မတူတဲ့ သူတွေကို အမျိုးသားရေးအမြင်နဲ့ စည်းရုံးနေတဲ့ ကျနော်တို့က မှားနေတယ်ဆိုပဲ . . . . အခုစာဖတ်နေတဲ့ ခင်ဗျားကရော ဘယ်လိုမြင်လဲ?
လူရမ်းကားများ၏ ယုတ်မာမှုကို တွန်းလှန်မည့်
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 10:16 PM
တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်အပြစ်တင်နေတာနဲ့ ကုလားက အပြစ်တင်တာတွေ ထိုင်ကြည့်နေမယ် ။ နှစ်ဖက်စလုံးမောရင် ကုလားဆိုတဲ့ ကောင်က နှစ်ကောင်လုံးကို ဖင်တက်ချသွားမယ် ။ ကိုယ့် အမျိူးဘာသာကို ကာကွယ်ချင်တဲ့ စိတ်လေးများ ပြောင်းပေးပါ။ တစ်ယောက်တည်းထိုင်ဖတ်ရုံနဲ့ မပြီးဘူး။ အားလုံးတက်ညီလက်ညီ နဲ့ ယုတ်ညံ့တဲ့ ဝါဒ တိုက်ဖျက်ပွဲမှာ ပါဝင်ကြပါ။ ကျွန်တော် က တော့ အမြဲတမ်း ကိုယ့်ဘာသာ သာသနာ နဲ့ အမျိူးသားရေး အတွက် အသက်ရှင်နေသမျှ ကာကွယ်သွားမယ်။
အမျိုးဘာသာ.သာသနာကိုကာကွယ်မယ်ဆိုရင်စက်တင်ဘာအရေးအခင်းတုန်းက..future ပါခဲ့မယ်ထင်ပါတယ်.. future ရော..နအဖနဲ့မွတ်ဆလင်ဘယ်သူက..ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပိုကိုစော်ကားတယ်ထင်ပါသလဲ..ခရစ်ယာန်တယ်.ဘာသာပြောင်းသွားတယ်..မွတ်ဆလင်တွေလည်းဘာသာပြောင်းသွားတယ်..ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချို့လဲ..ဘာသာပြောင်းသွားတယ်...ဘာသာကွဲက..ဗုဒ္ဓဘာသာကိုစော်ကားတာနဲ့..ဘာသာတူ..နအဖက..ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘုန်းကြီးကိုစော်ကားတာ..ဘယ်ဟာက..ပိုစော်ကားရာရောက်သလဲ...